UZuma usola abasemazweni angaphandle ngemizamo yokumketula | News24
UZuma usola abasemazweni angaphandle ngemizamo yokumketula
Sam Mkokeli, Paul Vecchiatto, Mike Cohen, News24
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma uphinde waphunyula emizamweni yamanye amalungu esigungu esiphezulu e-African National Congress (ANC) okumketula, ngokombiko wamalungu amathathu eNational Executive Committee (NEC).
Enkulumweni yakhe yokuvala umhlangano wezinsuku ezintathu, uZuma ukubeke kwacaca ukuthi angeke aze ehle esikhundleni, ngokusho kwelinye lamalungu eNEC.
Ube esesola abesemazweni angaphandle ngokuthi yibo kanye laba abaphehla le mizamo yokumkethula waphinde waxwayisa ngokuthi singaphinde senziwe isiphakamiso sokuthi ehle esikhundleni, kusho lesi sikhulu.
OLUNYE UDABA: UZuma 'wesabise ngokukhuluma uma abe-ANC beqhubeka nokumcasula'
Ikomiti lesigungu esiphezulu se-ANC linqume ukuthi kungavotwa ngesiphakamiso sokungamethembi uMengameli, ngokwamalungu aleli komiti, acele ukuthi angadalulwa ngoba awavunyelwe ukukhuluma emphakathini ngalolu daba.
UZuma, 75, kungenzeka aphinde aphunyule uma sekuvotelwa isiphakamiso sokungamethembi ePhalamende nesesekwa amaqembu aphikisayo, kungakhathalekile ukuthi iNkantolo yoMthethosisekelo iyawukhipha yini umyalelo wokuthi kuvotwe ngokuyimfihlo noma cha. Lokhu kungenxa yokuthi amaLungu ePhalamende angamalungu e-ANC enza u-62% wezihlalo ezingu-400 ePhalamende.
Omunye umthombo utshele iNews24 ukuthi uZuma usabise kabi labo abebephikisana naye ukuthi bangalinge “bamphushe kakhulu”. “Ubecasuke kakhulu. Bengiqala ukumbona ecasuke kanje,” kusho umthombo obungaphakathi emhlanganweni wesigungu esiphezulu.
“Bengilokhu ngithule ngoba angifuni ukulimaza i-ANC, ngakho qhubekani nokungihlasela kwabezindaba futhi nizobona,” uZuma ucashunwe esho kanjalo kwi-NEC.